ShweMinThar: ​အောင်​မြင်​​ပျော်​ရွှင်​ လုပ်​ငန်းခွင်
ကျောင်းနေပျော်၍ စာတော်ရမည် ဆိုတဲ့ ဆောင်ပုဒ်လေးကို စာသင်ကျောင်းတွေမှာ တွေ့နိုင်ပါတယ်။ ဒီဆောင်ပုဒ်လေးမှာ (၂) ပိုင်းပါဝင်ပါတယ်။ ကျောင်းနေပျော်ရမယ် ဆိုတဲ့အပိုင်းနဲ့ စာတော်ရမယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းပါ။ စာတော်ရမယ်ဆိုတဲ့ အပိုင်းကို နောက်မှာ ထားရတဲ့အကြောင်းအရင်းက ကျောင်းတက်ရတာ ပျော်တဲ့ကျောင်းသားတွေ အနေနဲ့ စာတော်အောင် ၀ိုင်းဝန်းကူညီပံ့ပိုးကြိုးစားရင် ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ စာရေးသူ ယူဆမိပါတယ်။ အမြင်ကွဲလွဲမှုတော့ရှိနိုင်ပါတယ်။
ဒီလိုပါပဲ လုပ်ငန်းခွင်တွေမှာလည်း အလုပ်နေပျော်ပြီး စွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းရပါမယ်။ ၀န်ထမ်းတွေဟာ မနက်မိုးလင်းလို့ မျက်လုံးနှစ်လုံးဖွင့်လိုက်တာနဲ့ ဒီနေ့လည်းရုံးသွားရအုံးမှာပဲ ဆိုတဲ့အတွေမျိုး၊ တာဝန်အရသာ လစာယူထားလို့သွားရမှာ မသွားချင်ဘူး ဆိုတဲ့အတွေးမျိုးဝင်နေရင် လုပ်ငန်းခွင်မှာ သူတို့နေမပျော်တော့ပါဘူး။ အခြေအနေတစ်ခုကြောင့် ဆက်လုပ် နေရင်တောင် အခြားအလုပ်ပြောင်းဖို့ သူတို့ကြိုးစားတတ်တာများပါတယ်။
၀န်ထမ်းအထွက်နှုန်းများတာနဲ့ နေမပျော်ဘဲ တာဝန်အရသာလုပ်နေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေ ရှိနေတာနဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင် ၀န်ထမ်းအထွက်နှုန်းများတာကသာ ပိုကောင်းသယောင် ဖြစ်နေပါတယ်။ အလုပ်နေပျော်တဲ့ ၀န်ထမ်းတွေဟာ အများအားဖြင့် သာမာန်ထက် အလုပ်ကိုပိုကြိုးစားလုပ်ကိုင်ကြပါတယ်။ တာဝန်အရလို့ မယူဆတတ်ကြဘဲ ဒီအလုပ် လုပ်ရတာကို ဂုဏ်ယူဝံ့ကြွားဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် လုပ်ငန်းခွင်မှာ နေပျော်တာဟာ ၀န်ထမ်းတွေရဲ့ လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည်အပေါ်မှာ သက်ရောက်မှု ရှိနေပါတယ်။ နေပျော်ဖွယ်လုပ်ငန်းခွင်ကောင်းတစ်ခုဖန်တီးယူတဲ့ နေရာမှာ အရေးကြီးတဲ့ အကြောင်းအရာ တချို့ကို ဖေါ်ပြလိုပါတယ်။
• Create the right environment. ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ လူမှုပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ အောင်မြင်မှုပိုင်းဆိုင်ရာ ပတ်ဝန်းကျင်အနေအထားတွေဟာ ၀န်ထမ်းတွေ အတွက် နေပျော်ဖွယ်လုပ်ငန်းခွင်ကောင်းတစ်ခုအနေနဲ့ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ (ဥပမာ- ရုံးမှာ ထိုင်စရာထိုင်ခုံတောင် တိတိကျကျ သတ်သတ် မှတ်မှတ်မရှိတာ၊ ကွန်ပျူတာသုံးရမယ့်အလုပ်မှာ ကွန်ပျူတာမရှိတာ) တွေဟာ ၀န်ထမ်းတွေကို စိတ်ပျက်စေပါတယ်။ ဒီလိုပါပဲ ၀န်ထမ်းတွေဟာ လူမှုပိုင်းဆိုင်ရာ တွေကိုအာရုံစိုက်ပါတယ်။ အဓိက ကတော့လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးပါ။
Vertical Communication အပေါ်အောက် ဆက်ဆံရေး (အထက်လူကြီး လက်အောက်ငယ်သားဆက်ဆံရေး) နဲ့ Horizontal Communication (လုပ်ဖေါ်ကိုင်ဘက် အချင်းချင်း ဆက်ဆံရေး) မှာ မကောင်းရင် ၀န်ထမ်းတွေအနေနဲ့ အဲဒီလုပ်ငန်းခွင်မှာ မလုပ်ချင်ကြတာများပါတယ်။ တခါတလေမှာ ရှိတတ်တာက အထက်လူကြီး စီမံခန့်ခွဲသူတွေဟာ တချို့ တော်တော်ကို လက်ပေါက်ကတ် အပြောအဆို ကြမ်းတဲ့သူတွေရှိပါတယ်။
ရုံးသွားဖို့စဉ်းစားလိုက်တာနဲ့ အဲဒီအကြောင်းပဲ ခေါင်းထဲရောက်လာပြီးမသွားချင်ဘူးလို့ ၀န်ထမ်းတွေစဉ်းစားနေပြီဆိုရင်တော့ ရုံးနေပျော်ပြီး စွမ်းဆောင်ရည် ကောင်းရမယ်ဆိုတာပြောင်းပြန်ဖြစ်သွား ပါလိမ့်မယ်။ အောင်မြင်မှုပိုင်းဆိုင်ရာမှာ အလုပ်လုပ်ရင် လုပ်သလောက် အသိအမှတ်ပြုပေးတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုကို ဖန်တီးပေးရပါမယ်။ ၀န်ထမ်းတွေဟာ သူတို့ ကြိုးစားရင်ကြိုးစားသလောက် တစ်ခုခု အသိအမှတ် ပြုတာကို မျှော်လင့်နေတတ်ပါတယ်။ ဒီလို ပတ်ဝန်းကျင်သုံးခုကို ပေါင်းစပ်ပြီး နေပျော်ဖွယ်လုပ်ငန်းခွင်နေရာတစ်ခုဖြစ်အောင် ဖန်တီးပါ။
• Know what makes people happy__ and unhappy. ဘယ်အကြောင်း အရာတွေဟာ ၀န်ထမ်းတွေရဲ့ လုပ်ငန်းခွင်ပျော်ရွှင်မှုတွေကို ပျက်စီးစေသလဲ၊ ဘယ်အကြောင်းအရာတွေက ၀န်ထမ်းတွေ မိမိတို့အလုပ်မှာ ပျော်ရွှင်စေသလဲ ဆိုတာကို သိအောင်လုပ်ပါ။ ၀န်ထမ်းတွေဟာ ဘာကြောင့်ငိုကြသလဲ (လုပ်ငန်းခွင်မပျော်ရွှင်၊စိတ်မကျေနပ်ကြလဲ) ဆိုတာသိရင် မငိုအောင် လုပ်ဖို့နည်းလမ်းကို စဉ်းစားလို့ ရပါတယ်။ ငိုနေတဲ့ခလေးတွေကို ရယ်အောင် လုပ်ဖို့ဆိုတာ အရင်ဆုံး မငိုအောင်၊ အငိုတိတ်အောင် အရင်လုပ်ရတယ် ဆိုတာ စာဖတ်သူတို့အားလုံးသိပြီးဖြစ်ပါတယ်။ အငိုတိတ်အောင်လုပ်ပြီးရင် ရယ်လာအောင် ဖန်တီးယူရပါမယ်။
• Developapleasant management style. မိမိအလုပ်ကို ချစ်မြတ်နိုးတဲ့ စီမံခန့်ခွဲသူမန်နေဂျာတွေဟာ မိမိအလုပ်ကို မချစ်မြတ်နိုးတဲ့ မန်နေဂျာတွေထက် အလုပ်မှာ အပြုသဘောဆောင်သဘောထားမျိုးရှိတတ်ပါတယ်။ သူတို့ချစ်မြတ်နိုးတဲ့ အလုပ်ကို လုပ်နေရတဲ့သူ ဖြစ်တဲ့အတွက်လည်း အလုပ်မှာ ပျော်ရွှင်နေတတ်ကြတယ်။ ဒီလိုပါပဲ ၀န်ထမ်းတွေအများစုဟာ သူတို့အလုပ်ကို သူတို့ချစ်မြတ်နိုးပြီး ကြိုးစားလုပ်ကိုင်တဲ့ မန်နေဂျာတွေနဲ့ အလုပ်လုပ်ရတာကို ပိုသဘောကျတာများပါတယ်။ သဘောမကျတဲ့ ၀န်ထမ်းတွေလည်း ရှိနိုင်ပါတယ်။
ဒါကြောင့်မို့ စီမံခန့်ခွဲသူတွေအနေနဲ့ မိမိတို့ရဲ့ အတွေးအမြင်တွေကို စီမံခန့်ခွဲဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ မိမိအလုပ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး အပြုသဘောဆောင် စဉ်းစားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ အလုပ်ကိုချစ်မြတ်နိုးပါ။ စီမံခန့်ခွဲသူတွေနဲ့ ၀န်ထမ်းတွေအတွက် အဓိက အရေးကြီးဆုံးထဲမှာ ပါတဲ့ အချက်တစ်ခုကတော့ မိမိတို့လုပ်နေတဲ့အလုပ်ကို ချစ်မြတ်နိုးဖို့ပါ။ ချစ်မြတ်နိုးတဲ့အလုပ်ကို လုပ်တဲ့သူဟာ သူ့ဘ၀မှာ ဘယ်တော့မှ အလုပ်မလုပ်ရတော့ဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ သူကအလုပ်လို့ကို မထင်တော့လို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစကားကို ပြောခဲ့သူကတော့ အများသိပြီးဖြစ်တဲ့ Steve Jobs ပဲဖြစ်ပါတယ်။
• Promote openness and trust. ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိပါ။ ယုံကြည်မှုတွေနဲ့ အလုပ်လုပ်ပါ။ ၀န်ထမ်းအများစုဟာ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုမရှိတဲ့ စီမံခန့်ခွဲသူတွေနဲ့ အများအားဖြင့် အလုပ်မလုပ်ချင်ကြပါဘူး။ ဒါကြောင့် ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိပါ။ လိုအပ်လို့ လျို့ဝှက်ရမယ့် ထိပ်တန်း လျို့ဝှက်ချက် Top Secrets တွေကိုတော့ လျို့ဝှက်ထားပါ။ ယုံကြည်မှုဆိုတာ လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းမှာ အရေးကြီးပါတယ်။ ယုံကြည်မှုမရှိတဲ့အခါမှာ သူ့ကိုယ်မယုံ၊ ကိုယ့်သူမယုံနဲ့ လုပ်ငန်းအောင်မြင် သင့်သလောက် မအောင်မြင်နိုင်ပါဘူး။
• Recognise contributions. ၀န်ထမ်းတွေရဲ့ ကြိုးစားအားထုတ်မှုကို အသိအမှတ်ပြုပေးလိုက်ပါ။ ၀န်ထမ်းတွေဟာ သူတို့ရဲ့ ကြိုးစားအားထုတ်မှု တွေအတွက် အသိအမှတ်ပြုခံရမှုကို မျှော်လင့်နေကြပါတယ်။ ၀န်ထမ်းတွေ အလုပ်မှာ နေမပျော်ဘဲ ထွက်သွားကြတဲ့ အဓိကအကြောင်းအရင်းတွေမှာ အသိအမှတ်မပြုတဲ့အကြောင်းကြောင့် ဖြစ်နေတာတွေမြင်တွေ့နေရပါတယ်။ သူတို့မျှော်လင့်တဲ့ အသိအမှတ်ပြုမှုတွေကို စီမံခန့်ခွဲသူတွေက မပေးဘဲနဲ့ ၀န်ထမ်းတွေ အလုပ်ခွင်မှာ နေပျော်အောင်လုပ်ဖို့ဆိုတာ အတော် မလွယ်ကူပါဘူး။
• Encourage team identity. A champion team beatsateam of champions. ဆိုတဲ့စကားအတိုင်း တကယ့်ကို စည်းစည်းလုံးလုံးနဲ့ တက်ညီ လက်ညီအောင်မြင်တဲ့ Chanmpion အသင်းတစ်သင်းဟာ အောင်မြင်တဲ့ Champion တွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ အသင်းကို အောင်မြင်နိုင်ပါတယ်။ ဘောလုံးလောကမှာ ဒိတ်ဒိတ်ကြဲအများစုဟာ အင်္ဂလန်မှာ ရှိနေတတ်ပြီး ကမ္ဘာ့ဖလားကို အမြဲတမ်း မရတဲ့ အဖြေဟာ ဒီအဖြေပဲဖြစ်ပါတယ်။
• Fight boredom in the workplace. အလုပ်တစ်ခုတည်းကိုပဲ အမြဲတမ်း လုပ်နေရရင် ၀န်ထမ်းတွေဟာ ပျင်းရိသွားတတ်ပါတယ်။ စိန်ခေါ်မှုအသစ်တွေ မရှိတော့ရင် ပျင်းရိတတ်ပါတယ်။ လိုအပ်ရင် ၀န်ထမ်းတွေကို Job Rotation လုပ်ပေးရပါမယ်။ ဒီနေရာမှာ စီမံခန့်ခွဲသူရဲ့ ၀န်ထမ်းတွေအပေါ် အလုပ်အကိုင် ဒီဇိုင်း Job Design သတ်မှတ်မှုဟာ အရေးကြီးပါတယ်။
• Empower your employees. ၀န်ထမ်းတွေကို ပေးသင့်ပေးထိုက်တဲ့ လုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးပါ။ အရာအားလုံးကို မထိန်းချုပ်ထားပါနဲ့။ နေရာတကာ မိမိမပါရင် မဖြစ်လို့ မယူဆပါနဲ့။ ပေးသင့်ပေးထိုက်တဲ့ လုပ်ပိုင်ခွင့်အချို့ဟာ ၀န်ထမ်းတွေအတွက် စိတ်အားတက်ကြွလာစေပါတယ်။
ဖေါ်ပြခဲ့တဲ့ အကြောင်းအရာတွေဟာ ၀န်ထမ်းတွေအတွက် နေပျော်ဖွယ် လုပ်ငန်းခွင် တစ်ခုကိုဖန်တီးတဲ့နေရာမှာ အထောက်အပံ့ရစေပါတယ်။ ဒီအကြောင်းအရာတွေဟာ နေပျော်ဖွယ်လုပ်ငန်းခွင်ကောင်းတစ်ခုကိုဖန်တီးပေးရုံသာမက လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည် တိုးတက်ကောင်းမွန်လာစေဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ Motivation တွေကိုပါဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။